Kabaha Kabaha Casriga ah ee Neefsan kara Haweenka ...
Mens dacas Moccasins for Ragga raaxo raxan safan la ...
Moccasins for Women raaxo raxan safka la Micro suede ...
DailyShoes Haweenka Raaxo Leh Wareega Suulka ...
Diiran jilicsan dahaarka safka Ragga dacas Indo ...
Kabaha Haweenka Oo Ku Siibanaya Iftiinka Raaxo Oo Lagu Tilmaamay ...
Kabaha Cananaaska Fluffy ee Carruurta, Kartoonada Gudaha ...
Cute Unisex-Kids Clippers Furry Dharka
Sneaker Dharka Raga oo Kabaha Socodka ku ordaya
Dumarka Gabdhaha 'Bunny Wajiga Difaaca Diiran ...
Kabaha Casriga ah ee Haweenka
Kabaha Dumarka ee Leysku xidho Moccasin
Gabdhaha Glitter Flats Kabaha Ballet
Kabaha Joogtada ah ee Haweenka Jinsiga ah ee Midabbada Badan O ...
Kabaha Cagaaran ee Ubaxyada Haweenka
Kabaha Carruurta 'Dinosaur Slipper Kabaha Carruurta ...
Sneakers Ragga Dharka Fudud ee Orodka Sho ...
Saanqaadaha maqaarka ragga
Kabaha Kabaha Casriga ah ee Neefsashada Dumarka Loafers Guryaha Kabaha Socodka
***Macluumaadka aasaasiga ah
Qaabka Maya .:
Haweenka US6-11 #
*** Talaabooyinka Lagu Shaqeynayo
Goynta → Tolmada → Joogitaanka → Kormeerka Qadka → Hubinta Birta → Xirxirida
** Qaado fudeyd inaad ku dhex lugeyso ama guriga aad joogto. Kabaha aan taraafikada ahayn ee adag oo keliya ayaa kula socda maalinta oo dhan.
** Kabaha Casriga ah ee loo yaqaan 'Womens Casual Casual' ayaa lagama maarmaan u ah xirashada maalin kasta.
** Kabaha Cawada Cad waxay u egyihiin muuqaal caadi ah oo lagu xidho ficil ahaan nooc kasta oo aan caadi ahayn oo ku habboon sida sundresses, gaab, capris, surwaal, jiinis, skorts, iwm.
**** E-mailka: enquiry@teamland.cn
*** Suuqyada Waaweyn ee Dhoofinta
Mid Bariga / Koonfur Afrika
Waqooyiga / Koonfurta Ameerika
Bariga / Galbeedka Yurub
*** Baako & Shixnad
FOB Port: Waqtiga Lead Leading ee Shanghai: 45-60 maalmood
Cabbirka baakadka: 54 * 32 * 24cm Miisaanka saafiga ah: 2.40kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 2.90kg
*** Bixinta & Gaarsiinta
Habka Bixinta: 30% deebaajiga hore iyo isu dheelitirka maraakiibta
Faahfaahinta Bixinta: 60 maalmood kadib faahfaahinta la oggolaaday
*** Faa'iidada Tartanka Aasaasiga ah
Amarro Yar Yar Oo La Aqbalay
Haweenka Wareegsan Suulka Raaxada Raaxada Quruxda Badan ee Kabaha Guryaha Ballet
Sawir gacmeed → Qaab ting Goyn → Tolid → Baaritaan gudaha ah Che Hubinta Birta → Xirxirida
Naqshadeynta & fudfudud ka baxsan dhulka ayaa bixisa kala-bax aan simbiriirixan ahayn iyo duugga gudaha iyo dibedda. Tilmaamaha astaamaha la duubay ayaa sifiican ugu lammaaneyn kara dhar kasta.
Dahaarka Jilicsan & Maqaarka-Saaxiibka: Dahaarka u eg daruurta ayaa dhunkasho jilicsan ugu tuuraysa suulasha yar yar, iyagoo u diraya raaxo u eg barkin xilligii ay ku siibanaysay
Xumbada cufnaanta badan ee xumbadu waxay ku sameysataa cagahaaga waxayna haysaa qaabka. Jilicsan oo raaxo leh.
dhar-iyo-dardaaran. Hadiyad wanaagsan oo loogu talagalay Baabtiis, Halloween, hadiyad Kirismas ah ama dhar iska caadi ah.
Guri ballet Classic ah oo leh Premium-Latex Cushioned Foot-Bed, oo loogu talagalay raaxada ugu dambeysa
Cabbirka baakadka: 39 * 34 * 30cm Miisaanka saafiga ah: 2.1kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 2.6kg
Gabdhaha Dharka Xidigaha Sarajoogga ah ee Dharka Fluce Diiran Difaacayaasha Guryaha Difaaca Guryaha Difaaca
Gabdhaha UK6-13 #
Dibnaha Naqshadeynta: - sare sare oo leh naqshad balaastiig caag ah oo qaab xiddig leh ayaa ilmahaaga siisa kabadho guri oo u gaar ah. Sibirid fudud oo naqshadaysan, oo ka dhigaysa mid ku habboon in la xidho. Kadibna waxay lugaha lugaha lugaha lugaha si tartiib ah oo marna ma simbiriirixan doonaa.
Mashiinka Dhaqi kara. Hadiyad wanaagsan oo loogu talagalay Baabtiis, Halloween, hadiyad Kirismas ah ama dhar iska caadi ah.
Cabbirka baakadka: 45 * 32 * 24cm Miisaanka saafiga ah: 2.5kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 3.1kg
Dumarka Gudaha Dibadda Xusuusta Xusuusta Xumbo Moccasin Slipper W / Faux Fur Collar
Buluug, Casaan, Cawl, bunni, shukulaato
Haweenka’s US6-11M & W
Sawiridda → Qaab old Goyn → Tolmo → Joogtay → Shamiit → Qaabeyn pection Baaritaan Khadka ah Che Baadhitaanka Birta → Xidhmada
** Harag Suede. Insole: Maqaarka Doofaarka ee Sariirta cagaha ee barkin-gacmeedka barkin-gacmeedku wuxuu kaa dhigaa inaad dareento Raaxo, Hygroscopic iyo Sii deynta Dhidid.
** Marka laga reebo dahaadhka dhogorta badan ee jilicsan ee faux, waxaa jira hal shey oo muhiim ah oo ka dhigaya kabadhkaan diiran diiran. Si qaas ah, siibbadayaasha moccasin waxay leeyihiin meel xun oo xumbada ka baxsan oo u dhiganta cagtaada waxayna siisaa raaxo fiican.
Waraaqaha xumbada xusuusta waxay ku yimaadaan dhammaan haweenka qaangaarka ah ee cabirka kabaha Mareykanka (6-11) iyo midabada 5aad ee xiisaha leh, si aad u doorato midka ugu habboon qaabkaaga, shakhsiyaddaada iyo dharka aad jeceshahay ama xitaa jiifka! Midabada la heli karo ayaa ahBuluug, Casaan, Cawl, bunni, shukulaato.
** E-mailka: enquiry@teamland.cn
Cabbirka baakadka: 61 * 45 * 35cm Miisaanka saafiga ah: 5.5kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 6.50kg
Kabaha Guryaha Wiilasha & Gabdhaha Cartoon Dinosaur Cute jilicsan Kabaha Jiilaalka ee Ka-hortagga
Wiilasha & gabdhaha US1-6 #
** MAADDADA JOOGTA: Waxyaabaha fudud iyo kuwa jilicsan ayaa ka dhigaya dacas biirayaasha mid aad u fudud in la laalaabo oo la dhigo, taas oo u oggolaanaysa ilmahaaga inuu lugeeyo, seexdo, oo uu ciyaaro isagoo raaxo dareemaya maalintii oo dhan.
** KHIBRAD LACAG LA'AAN: Carruur ama socod baradka ma awoodi karaan inay indhaha ka saaraan kabadhkan xiisaha leh ee kartoonada loogu talagalay. Waxay jecel yihiin oo ku filan inay ku baraarujiyaan harraadkooda inay lahaadaan mid, way fududahay in lagu daro wax kasta oo xidhashada ama suudhka oo aad ugu fiican isticmaalka gudaha iyo dibaddaba.
** DHAQAN YAR OO DHAN: Wareegyadan ayaa siiya ilmahaaga xoogaa diirimaad ah xilliyada qabow iyo daboolid ku filan maalmaha qorraxda, taas oo ka dhigaysa laba cimilo oo is-dul-wareeg ah.
Xilliyadaha Ragga ee Xarafka Xumbada Xusuusta ee Ragga Bannaanka Gudihiisa
Ragga’s US8-13M & W
Slippers Men Ultimate Comfort: Dahaarka Jilicsan ee Gudaha wuxuu ku siin doonaa ku habboon weyn oo loogu talagalay raaxaysiga ugu sarreeya oo cagahaaga ku ilaalin doona raaxo, raaxo iyo diiran.
Kabo-baxayaasha loogu talagalay Ragga Gudaha Xirashada Dharka: Kabaha caagga ah ee adkeysiga ah iyo is-daba-joogga ah waxay xaqiijinayaan tillaabooyin kalsooni leh oo ku wareegsan hareeraha gudaha iyo dibaddaba, sidoo kale waa la gashan karaa iyada oo ah kabo wadista wadista ah.
Fluffy faux dhogorta ragga ragga ah ee loo yaqaan 'slippers house' ee ragga waxaa lagu dhejiyaa faux dhogor diiran iyo raaxo daran. Ragga moccasin slippers xumbo xasuusta taas oo runtii kaa dhigeysa inaad ku raaxeysato jilicsanaanta xirashada, adigoo si fudud u siibanaya mar kasta oo aad rabto cagahaaga inay nastaan; Markaad guriga timaaddo, ku sibiibixan funaanadaha moccasin, si buuxda cagahaaga u dabci maalin dheer oo wadista iyo shaqada ka dib.
Cabbirka baakadka: 57 * 47 * 35cm Miisaanka saafiga ah: 4.80kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 5.90kg
Ragga Xusuusta Raaxada leh Xumbada Guryaha Difaac Aan Laheyn
Ragga US8-13 #
** Isugeynta dharka dhogorta jilicsan ee jilicsan oo jilicsan oo tayo sare leh. Kabaha ayaa ku siinaya labalaab difaac adag oo jilicsan iyo dharka aan biyuhu kajirin ma sahlana in timo la waayo.
** Maaddooyin khafiif ah oo jilicsan ayaa ka dhigaya dacas badeedka mid aad u fudud oo laabi karo oo la dhigi karo Waad kaxaysan kartaa markaad safraysid, dalxiiska, xafiiska ama hoteelka. Nasteexo cagahaaga wakhti kasta iyo meel kasta.
** Kali kali ah ha ku siiban tallaabada dibedda si aad u soo qaadato waraaqda subaxa, eeyga u lugee, waraabinta ubaxyada iwm. Mashiinka la dhaqi karo ayaa fududeeyay daryeelka.
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 6.2kg
Ragga dacas-goobeedka 'Moccasins' ee Ragga Raaxada raaxada leh ee safka ku leh Microsuede Bannaanka Dibadda ee Kabaha Guryaha
SUUQA TAYO - Kabaha silsiladda 'Moccasin' oo laga soo farsameeyay suede dhab ah oo lagu heli karo xulashooyin midabyo kala duwan ah.
INSOLES PADDED - Waxyaabaha ku habboon ee khafiifka ah ee dhogorta dhogorta leh, oo ku siinaya dareenka ugu raaxada badan.
Moccasins aan caadi ahayn oo loogu talagalay kabaha jiifka ee guriga, adkeysi iyo sibiibix u adkaysta biraha TPR keligiis ayaa kaa difaaci kara inaad siibato ama siibato.
Hadiyad weyn oo loogu talagalay qoysaskaaga iyo asxaabtaada dhammaan noocyada ciidaha si loo siiyo cagaha daalay nasasho ay u qalmaan.
Cabbirka baakadka: 57 * 45 * 35cm Miisaanka saafiga ah: 4.80kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 5.9kg
Slimka Dumarka iyo Ragga ee Sneakers Casual Lightual
Qaabka Aasaasiga ah ee Macluumaadka Nooca.: 19-024 Asalka: Shiinaha Sare: Dahaarka Sintetikada: Mesh Sock: Mesh Sole: EVA Color: Gray, Black, Pink, Purple, Buluugga Qiyaasta: Haweenka US5-9 # Ragga US8-12 # Waqtiga Hogaaminta: 45-60 maalmood MOQ: 1000PRS xirxirida: Polybag FOB Port: Shanghai Processing Steps Stepping → Qaab, Goynta → Tolida → Joogtay → Cirbad Ins Kormeerka Qadka Che Hubinta Birta → Codsiyada xirxirashada Kabahaani waxay ku habboon yihiin noocyo kala duwan oo ...
Sneakers Dumarka Xusuusta Neefta Leh
Qaabka Aasaasiga ah ee Macluumaadka Nooca.: 18-102 Asalka: Shiinaha Sare: Dahaarka Duullimaadka Mesh: Sock Mesh: PU Sole: EVA Color: Navy, Beige, Gray, Blue, White, Pink Sizes: Haweenka US5-9 # Waqtiga Hogaaminta: 45- 60 Maalmood MOQ: 1000PRS Xirxirida: Polybag FOB Port: Shanghai Processing Steps Steps old Qaab dhismeedka → Goynta → Tolida → Joogitaanka → Cirbadda Ins Kormeerka Qadka Che Hubinta Birta → Codsiyada xirxirashada Isboortigaan waxay ku habboon yihiin gudaha iyo dibedda, xulashada ugu fiican orodka, socodka iwm. Neefsasho jilicsan ...
Mokcasins for Women Rakcadsan oo raxan ah oo ay weheliso Micro suede Dusha Sare Bannaanka Bannaanka ee Kabaha Guryaha
RAAXO LEH - Koobabyada raaxada leh ayaa ku habboon labadaba isticmaalka gudaha iyo ka baxsan TPR waxay u oggolaaneysaa iftiinka isticmaalka banaanka.
Cabbirka baakadka: 61 * 45 * 35cm Miisaanka saafiga ah: 5.50kg
Halbeegyada Kartoonka Dhoofinta: 12PRS / CTN Miisaanka guud: 6.20kg
Qaabka Aasaasiga ah ee Macluumaadka Nooca.: TLDL-01 Asalka: Shiinaha Sare: Lakabka maqaarka: Mesh Sock: Mesh Sole: Midabka Rubber: Madoobaadka Madoow: Ragga US8-13 # Waqtiga Hogaaminta: 45-60 Maalmaha MOQ: 1000PRS Baakadaha: Polybag FOB Port: Tallaabooyinka Waxqabadka ee Shanghai Sawiridda old Caaryada → Goynta → Tolitaanka → Joogtaynaya jection Cirbadda pection Kormeerka Qadka cking Hubinta Birta Applic Codsiyada xirxirashada Isboortigaani waxay ka muuqdaan maqaar jilicsan oo sare oo kaalmo iyo raaxo leh. Maqaar-Fudud-si-daryeel leh oo leh lakab mesh-maqaarka ku habboon ...
Cinwaanka:2805, 28aad Fl. Juhao Tower, Qaybta A, Ganacsiga Caalamiga ah ee Plaza, Lambarka 2 Hongcheng Road, Nanchang, Jiangxi, China Pc330002
Lagu Sameeyay Xiriirka Shiinaha:Halkan guji si aad ugu sameyso Shiinaha
Xiriirka Bakhaarka AMAZON US: Halkan guji si AMAZON US Store
Isku xirka AMAZON CA: Halkan guji si AMAZON CA Store